Easypromos na-enye ngwa ọrụ zuru oke yana njikwa nchekwa 11 maka nlekota na igbochi wayo na asọmpi ịtụ vootu gị. Ga-enwekwa ike ịbanye na Ndepụta Egwu - Ngwá ọrụ ga-agwa gị ma ọ bụrụ na onye ọrụ emeela aghụghọ, na-enyere gị aka ikpebi izi ezi nke ntinye ya. Na Easypromos Fraud Control Sistem ga - enyere gị aka ịchọpụta ma gbochie omume ọjọọ; zere esemokwu dị n'etiti ndị so na ya; ma hazie asọmpi ịtụ vootu doro anya maka obodo gị.